Filtrer les éléments par date : vendredi, 03 janvier 2020
vendredi, 03 janvier 2020 23:12
Toamasina: Karana Mpivaro-damba norobain’ny jiolahy mitam-basy
Lasan’ireo jiolahy ny vola manodidina ny valo hetsy Ariary sy finday tao amin’ny toerampivarotan-damba iray tantanan’ny karana teo Anjoma-Toamasina androany. Karana zokiolona iray ihany koa niharan’ny herisetra, novelesina vodibasy ny lohany.
vendredi, 03 janvier 2020 23:01
Antananarivo: Faritra maro no dibodrano vokatry ny rotsak’orana
Misedra olana vokatry ny fiandronan’ny rano ireo tanàna miorina amin’ny faritra iva toerana eto an-drenivohitra taorian’ny rotsak’orana nisesy hatramin’ny 31 desambra 2019 no mankaty.
Mitaintaina amin’ny mety ho fihotsahan’ny tany sy vato ihany koa ireo mponina amin’ny faritra avo.
vendredi, 03 janvier 2020 22:53
Magro Behoririka: Hitohy rahampitso ny hetsiky ny mpitaky ny marina
Hetsika voalohany amin’ity taona 2020 ity etsy amin’ny Magro Behoririka - Antananarivo, no hataon’ireo mpitaky ny marina tamin’ny fifidianana kaominaly notanterahina ny 27 novambra 2019.
« Tandindinin-doza ilay fahamarinana », hoy ny depiote Fidèle Razarapiera ka « mitaky izahay avoahy ny marina » raha nitafa tamin’ny mpanao gazety tao Bel’Air misy ny foiben-toeran’ny antoko Tiako i Madagasikara androany.
Nanamafy izany i Rina Randriamasinoro, kandidan’ny Tiako i Madagasikara tamin’ny fifidianana Ben’ny tanàna teto Antananrivo Renivohitra. « Porofoy aminay fa nandeha tamin'ny fahamarinana iny fifidianana iny », hoy ity farany.
vendredi, 03 janvier 2020 08:28
Fahadiovan'ny lehilahy: Mila miaratra ve?
Matetika ny vehivavy foana no omena tsiny fa ela loatra ao amin'ny douche, misy aza ny lehilahy, indray mandeha isan-kerinandro ihany no mandro, vitan'ny sasapiso fotsony.
Nefa na vehivavy, na lehilahy dia mila fahadiovana ho an'ny fahasalamana sy ny manodidina ihany koa.
Ny lehilahy amin'ny ankapobeny dia betsaka volovolo, na tarehy, na ambany helika, na anelakela-pe na ny tratra, ny tongotra sy ny tanana.
Azo afohezina na aratana mihitsy izy ireny, satria dia mitazona bakteria izay mahatonga fofona, sasana isan'andro ny vatana, azo atao ireny huile essentiel ireny na mampiasa akora natoraly toy ny alamo, vinaigre fotsy, voasary makirana...
Mila maina hatrany ny hoditra ho an'ny lehilahy, satria tsemboka lava, azo safidianana ireny akanjo coton ireny amin'ny andro mafana.